လူမှုစီးပွားရေးအသစ်ကိုစတင်လိုက်ပါ – GSN
နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ သမိုင်းရှိသည်
GSN သည် Tang မင်းဆက် မှစ၍ အလှည့်ကျစုဆောင်းမှုနှင့်ချေးငွေအသင်း (
) ပုံစံကိုလုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ GSN သည်နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ရှေးခေတ်ဉာဏ်ပညာကိုနည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကယူဆောင်ပေးသည်။
လူများသည်အငြိမ်းစားယူရန်မျှော်လင့်လျက်သူတို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်၏ငွေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘဏ်များသည်သင့်ထံမှအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ သင်ကသူတို့ကဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အခမဲ့ပေးနေခဲ့သလိုဖြစ်နေသည်။
အခြားသူများကိုကူညီ ရန်အသေးစားချေးငွေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏်ငွေများကိုပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးချ၍ ကူညီသည်။ ကမ္ဘာအ ၀ှမ်းမှလူများအားကူညီရန်စူးစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်မှုကိုရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကို့ပထမ ဦး ဆုံးအလွှာလိုက်ငွေချေးခြင်းကိုသမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်တွင်အလွှာလိုက်ငွေချေးခြင်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း
ပြဿနာကဘာလဲ? ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်အသေးစားချေးငွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကောင်းမွန်သောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့်စနစ်မရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ယုံကြည်မှု၊ ဆက်ဆံရေး၊ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်တဆင့်စကာတဆင့်ဖြင့်ငွေရှာဖွေခြင်းအပေါ်ယနေ့တိုင်အောင်အခြေခံသည်!
ကမ္ဘာအနှံ့မှ အသေးစားငွေချေးသူများသည်သည်GDP (GSN ၏ငွေကြေး) ကိုပုံမှန်လည်ပတ်နေခြင်းအားဖြင့်လူမှုငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းမှအကျိုးရရှိမည်။ လူတိုင်း၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဂရုစိုက်သည့်အခါလူတိုင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်ပြီးစီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများရှင်သန်နိုင်သည်။
ဘာကြောင့် GSN ကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ။
GSN သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်သမိုင်းနှင့်အတူလူတို့တည်ဆောက်မည့်အနာဂတ်အတွက်အမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်မှုနှင့်သင်၏ငွေအလားအလာကိုအမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
မိရိုးဖလာသကျတူရှယျတူအခငျြးခငျြးမှအသေးစားခြေးငှစေနဈမြားသညျပါးစပျ၊ သူငယျခငျြး၊ မိသားစုနှငျ့ယုံကွညျမှုအပျေါတှငျမူတညျသညျ။ GSN သညျစီးပှားရေးကိုကောငျးမှနျစှာထိနျးသိမျးရနျအတှကျပငျြးရိပိုကျဆံနှငျ့အရငျးအမွဈမြားလညျပတျမှုကိုတိုးမွှငျ့နိုငျရနျသိပ်ပံနညျးကကြိုကျညီသော algorithm ကို အခွခေံ၍ ပထမ ဦး ဆုံးကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာဗဟိုခြုပျကိုငျမှုလြှော့ခထြားသညျ့အသေးစားငှခြေေးကှနျယကျကိုကမျးလှမျးသညျ။ လူတှကေိုကူညီပေးနတေယျ၊ ဒါကစဈမှနျတဲ့ဆနျးသဈတီထှငျမှုပဲ!
၃၀% ထိရှိေ သာအမြတ်ကိုရယူလိုက်ပါ
သင်၏ငွေများကို GSN အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသို့ဖြန့်ဝေရန်နှင့်အခြားသူများကိုသူတို့၏အသုံးစရိတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီခြင်းဖြင့်သင်သည်ု ၃၀% အထိအမြတ်ရနိုင်သည်။ ပါဝင်ခြင်းဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘဝပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဘ၀ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါ